Waa maxay U-jeedka safarka RW Rooble ee Imaaraadka? | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa maxay U-jeedka safarka RW Rooble ee Imaaraadka?
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayaa la filayaa inuu u socdaalo dalka isku-tagga Imaaraadka Carabta, kadib markii uu hore ugu dhawaaqay in dib u hagaajin lagu sameynayo, xiriirkii diblumaasiyadeed ee labada dal.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa u socdaalaya dalka isku-tagga Imaaraadka Carabka, kadib markii maalmo ka hor la soo gabagabeeyay doorashooyinka Soomaaliya ee uu gar-hayaha ka ahaa.
Sida ay caddeynayaan xogo ay heshay Keydmedia Online, u-jeedka socdaalka Ra’iisul Wasaaraha ayaa ah, ka qeyb galka aas loo sameenayo Madaxweynihii dalkaas Sheekh Khaliifa Bin Zayid bin Sultan Al Nahyan, oo jimcihii la soo dhaafay geeriyooday.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Rooble ayaa hore Shacabka iyo Dowladda Imaaraadka uga tacsiyeeyay geerida ku timid Allaha u naxariistee Sheekh Khaliifa, kaasoo uu bilo ka hor kula kulmay dalkaas, xilli uu safay labo maalin ah ku joogay Dubai.
Aaska Madaxweynaha dalka Imaaraadka Carabta, waxaa ka qeyb galaya madax kala duwan oo daafaha caalamka ka socda, waxa ayna Soomaaliya kamid tahay wadamadda Madaxdooda aaska lagu casuumay, waxaana ku matali doona RW Rooble.
Sida ay KON, u sheegeen, howl-wadeennada xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Rooble, wuxuu aaska kadib kulamo la qaadan doonaa madax katirsan dowladda Imaaraadka si uu ugala hadlo xiriirka labada dal iyo isbadalka ku yimid hoggaanka Soomaaliya.
Maxamed Xuseen Rooble, waxaa hore loogu amaanay doorka uu ka qaatay, dib u soo nooleynta xiriirka Diblumaasiyadeed ee Imaaraadka, kaas oo Farmaajo si ula kac ah u xumeeyay 2018, si uu dano gaar ah ugu fuliyo dalka Qatar oo 2017 madaxweyne ka dhigay.
Farmaajo, intii uu xaafiiska joogay wuxuu hor taagnaa, mashaariicdii Imaaraatku dalka ka fulin jiray, wuxuuna meesha ka saaray kabkii miisaaniyadeed, howlihii caafimaadka, fududeyntii dal ku galka, tababarkii ciidanka iyo adeegyadii kale oo ay qaban jireen.